Madaxweynaha Galmudug oo u ambabaxay Jabuuti, kadib casumaad uu ka helay madaxweyne Ismaciil Cumar Geelle | XORRIYA NEWS
Home Aqoon Guud Madaxweynaha Galmudug oo u ambabaxay Jabuuti, kadib casumaad uu ka helay madaxweyne...
Madaxweynaha Galmudug oo u ambabaxay Jabuuti, kadib casumaad uu ka helay madaxweyne Ismaciil Cumar Geelle
Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye iyo wefti uu hogaaminayo ayaa maanta safar shaqo ugu ambabaxay dalka Jabuuti Kaddib casuumaad rasmi ah oo uu ka helay madaxweynaha dalkaas Ismaaciil Cumar Geelle.
Guddoomiyaha Golaha Barlamaanka Galmudug, Maxamed Nur Gacal, mas’uuliyiin ka tirsan goleyaasha dowladda, siyaasiyiin iyo maamulka caasimadda ayaa weftiga madaxweynaha ka sagootiyey garoonka diyaaradaha Ugaas Nuur ee Dhuusamareeb.
Wax faahfaahin ah lagama bixin waxay kawada hadli doonaan Madaxweyne Ismaciil Cumar Geelle iyo madaxweynaha dowladda goboleedka Galmudug. Sidan si lamid ah, ayuu madaxweyne Ismaciil waxuu casumaad ugu fidiyey madaxweynaha Puntland.
Qoorqoor ayaa tan iyo markii loo dooraty madaxweynaha Galmudug waxaa uu waday dardar galinta siyaasadda iyo sidoo kale kulamada uu la leeyahy madaxda dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada.